Ndokwa iji gboo okporoko na Konya | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region42 KonyaIwu maka inyefe okporo ụzọ dị na Konya
12 / 09 / 2019 42 Konya, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
nhazi iji belata okporo ụzọ na Konya
Obodo Konya na-eme ọrụ iji hụ na nchekwa nke ndụ na ihe onwunwe nke ndị na-aga ije n'okporo ụzọ.
Obodo Konya, nke na-ewuli okporo ụzọ na okporo ụzọ dị iche iche maka iji nwayọọ nwayọọ na-agafe agafe ụkwụ na ụgbọala na-aga n'okirikiri obodo ahụ, na-emekwa atụmatụ ọhụrụ maka ihe ụmụ amaala chọrọ.
N’ịga n’ihu ịrụ ọrụ na nhazi na ngalaba akụrụngwa niile, Obodo mepere emepe na-eme ndokwa dị mkpa maka ndị na-aga ije n’okpuru Rauf Denktaş Underpass na Vatan Köprülü Junction na Rauf Denktaş Street, nke bụ otu n’ime ebumnuche njem dị mkpa nke obodo ahụ.
Iji hụ na nchekwa nke ụmụ amaala na-eji Rauf Denktaş akara dị ka onye na-aga ije, ntinye nke ụgbọala n'okporo ụzọ n'akụkụ ụzọ na-aga ije; Ndị na-agba ụkwụ ga-enwe ike ịgafe okporo ụzọ ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla mgbe ọrụ ndị ọzọ ezubere ka emechaa n'ime ụbọchị ole na ole.
Vatan Street na Beysehir Street, nke na-ejikọ ụzọ ụgbọ elu dị ọsọ nke ga-eme ka ndị na-agafe agafe na-agafe ọrụ ndị mepere emepe ma nwee ya ga-eme nhazi na etiti ahụ.
AYDINLIKEVLER BRIDGE ANA ANA EGO N’ALITE N’ALITE ANYA
Mpaghara Obodo ukwu na-aga n'ihu na-eme nhazi n'okporo ụzọ ndị dị mkpa dị na etiti obodo iji mee ka okporo ụzọ dịkwuo ala. Akwa Aydınlıkevler dị n'ofe gafere, Karatay Industrial na Old Industrial junction; atumatu nnochi nke agwaetiti a na-atụgharị anya, ụgbọ ala, ndị na-agba ụkwụ na okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe ka iwelie ọsọ ụgbọ mmiri.
Na-arụ ọrụ iji wezuga okporo ụzọ na Eskişehir
Okpokoro okporo ụzọ Konya napụtara
Ọdọ Mmiri Eurasia Relaghachi n'okporo ụzọ okporo ụzọ Istanbul…
Ihe Ntughari nke Tram na Enyemaka Diyarbakır Trafik…
Karşıyaka Ndokwa iji gbochie okporoko
Ümraniye Metro iji mezie okporo ụzọ nke Anatolian
Atụmatụ TCDD ga-ebu ụgbọ njem na Malatya
Ụlọ ọrụ Eletriki na Ụgbọ okporo ígwè dị na Manisa
Usoro njikọ Dalcık ga-agbagha Karamürsel Transportation
Mpaghara Kocaeli City Square Gburugburu Gburugburu Obodo
Ationgbọ njem na-anaghị akwụsị akwụsị na Ordu Boulevard Karşıyaka...
Iwu nke Relax Traffic na Konya
Rauf Denktaş Underpass